Israil oo albaabadu u laabey Masjidka al-Aqsa ee magaalada Qudus. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Israil oo albaabadu u laabey Masjidka al-Aqsa ee magaalada Qudus.
Israil oo albaabadu u laabey Masjidka al-Aqsa ee magaalada Qudus.
July 15, 2017 - By: Abdirizak Shiino
Ciidamanka Booliska ee Israil ayaa albaabada u laabey masjidka saddexaad ee barayakan ee al-Aqsa, kadib markii maalintii shalay ay toogasho ka dhacdey banaankiisa.
Maalintii shalay ayaan salaadda Jimacada lagu tukan Masjidka al-Aqsa, kadib markii ciidanamada Israa’iliyiintu ay xireen, sidoo kale waxay xabsiga dhigeen Sheekh caanka ah magaalada Qudus. Xiritaanka Masjidka iyo Sheekha ayaa daba socda toogasho subaxnimadii Jimacada ka dhacdey banaanka Masjidka.
Saddex nin oo Falastiiniyiin ah oo hubeysan ayaa rasaas ooda uga qaadey ciidamada Booliska Isra’il, waddada laga galo masjidka ee loo yaqaan Lion’s Gate, waxaana ay dileen laba kamid ah ciidanka Yuhuuda, halka ay dhaawaceen qaar kale, ka hor inta aan iyagana lagu dhex dilin banaanka Masjidka barakaysan ee al-Aqsa.
Maalinkasta oo Jimce ah waxaa Masjidka al-Aqsa u cibaado taga dad ka badan 10 000 oo qof kuwaas oo ka kala yimaada magaalooyin fog fog.
Masaajidka Barakaysan ee al-Aqsa iyo magaalada Qudus waxaa xoog ku haysta Israil oo dhankooda sheeganaya in Masjidku uu ka mid yahay goobaha barakaysan ee Yuhuudu leedahay.
Ma jiro wax war ah iyo canbaareyn ka soo baxdey Jaamacada Carabta oo ku aadan xiritaanka Masjidka iyo weerarkii ka horeeyey, waxaana dalalka carabta ugu xooga weynaa ay ku mashquulsan yihiin cunno qabateyn dhexdooda ah iyo dagaalka Yemen.